गजल के हो ? गजल सम्बन्धि रोचक प्रसङ्ग - chukuprakash | Nepali Lifestyle,Nepali literature,entertainment,Software
Home » जान्नैपर्ने कुराहरु , साहित्य » गजल के हो ? गजल सम्बन्धि रोचक प्रसङ्ग
गजल के हो ? गजल सम्बन्धि रोचक प्रसङ्ग
गजल के हो ?
गजललाई अंग्रेजी भाषामा Ghazal, हिन्दी भाषामा ग़जल, उर्दू भाषामा غزل भनिन्छ।
गजल भनेको प्रेमका विषयमा श्रृङ्गार रसका कविता लेखिने एकप्रकारको फारसी छन्द वा त्यसै छन्दमा लेखिएको कविता हो।
गजल भनेको प्राय ५ देखि ११ शेरहरू हुने उर्दु र फारसी कविताको एक प्रकार हो। यसका सबै शेर एउटै रदीफ एवं काफियामा आबद्ध हुन्छन् र प्रत्येक शेरको विषयवस्तु फरक हुन्छ। पहिलो शेरलाई मत्ला भनिन्छ, जसमा दुबै मिसरा अनुप्रासयुक्त हुन्छन् भने अन्तिम शेरलाई मकता भनिन्छ, जसमा गजलकारले आफ्नो उपनामको प्रयोग पनि गर्न सक्छ। गजलको संग्रहलाई दीवान भनिन्छ।
Labels: जान्नैपर्ने कुराहरु, साहित्य